The global PTFE Tapes Market report serves with all-inclusive, highly-effective, and thoroughly analyzed information inawell-organized manner, based on actual facts, about the Market. The whole information from scratch to the financial and management level of the established industries associat...ဆက်ဖတ်ရန် »
ထုတ်ကုန်အပေါ်အခြေခံပြီး, ထို PTFE ဖိုက်ဘာမှန်စျေးကွက်ပိတ်ထည်, တိပ်ခွေ, ခါးပတ်, ကြိုး, ချည်နှင့်မျှင်သို့ segmented ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ PTF ဖိုက်ဘာမှန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ချည် sewability တိုးတက်စေခြင်းနှင့်ပွတ်တိုက်အားလျှော့ချရန်အလုပ်နေကြသည်။ ဒါဟာအပူ-ပိတျထားသောစက်တွေနဲ့ဖျင်ပုံနှိပျပေါ်တွင်ဖြန့်ချိစာရွက်များများအတွက်အထည်များတွင်အသုံးပြုသည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Thread tapes are used to seal, lubricate, and prevent seizure on threaded bolts, studs, and fittings. They are commonly referred to as: Teflon tape PTFE tape PTFE thread seal tape plumber’s tape Thread tapes are usually made of polytetrafluoroethylene (PTFE),ahighly crystalline, perfluorinate...ဆက်ဖတ်ရန် »
100% သန့်စင်သော Non-sintered PTFE တိပ်၏ Rolls ချည်မဆိုအချင်းများနှင့်အမျိုးအစားပေါ်ပြီးပြည့်စုံကြာရှည်တံဆိပျပါစေ။ အဆိုပါတိပ်ခွေခိုင်မာစေခြင်းနှင့်သမဂ္ဂများနှင့်သော့ခလောက်တို့၏သိမ်းပိုက်ကာကွယ်ပေးသည်မထားဘူး။ Professional ကလိပ်ကိုလည်းဓာတ်ငွေ့နှင့်အတူအသုံးပြုမှုအတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မြင့်သောသိပ်သည်းဆ PTFE တိပ်များ၏လိပ်။ ဓာတ်ငွေ့ distrib များတွင်အသုံးပြုပါလျှင် ...ဆက်ဖတ်ရန် »